Qalliin lagu guuleystay oo lagu sameeyay lafdhabarta uur-jiifta - BBC News Somali
Qalliin lagu guuleystay oo lagu sameeyay lafdhabarta uur-jiifta
Lahaanshaha sawirka BETHAN SIMPSON
Image caption BETHAN SIMPSON
Waxaa qalliin lagu guuleystay oo lafdhabarta ah lagu sameeyay ilma yar oo aanan wali dhalan.
Bethan Simpson, waa haweeney 26 jir ah, waxaa loo sheegay in gabadheeda caloosha ku jirta baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday toddobaadkii 20-aad in lafdhabartu kala baxsan tahay.
Hooyo Simpson ayaa noqotay mid ka mid ah haweenkii ugu horreeyay dalka UK ee lagu sameeyo qaliinkii ugu horreeyay " ee toosinta uurjiifka"
Qalliinkii ugu horreeyay noociisa oo lagu sameeyay ilmo caloosha ku jira
Hooyo kaligeed ilmo korsatay oo sirteeda la wadaageysa dumarka kale
Qaliin ilmagaleenka ah oo soconayay afar saacadood ayaa uur-jiifka banaanka loo soo saaray, iyada oo dhaqaatiirta qaliinka wadayna ay ku toosiyeen qalooc ku jiray qeybta hoose ee lafdhabarta.
Siduu ahaa dareenka hooyo Simpson
Mrs Simpson ayaa sidan tan sheegtay "Ma dooneyn inaa iska soo tuuro ilmahayga oo aan dareemayay dhaqdhqaasiisa".
Qaliinka lagu sameeyay ilmaha caloosha ku jiray ayaa la rumeysan yahay inuu guuleystay waxa uuna dhalan doona bishi April ee soo socota.
Hooyada ilmahan yar Mrs Simpson ayaa sheegtay in iyada iyo seygeeda Keiron loosoo jeediyay in ilmaha caloosha ku jira ay iska soo tuurto, kaddib markii la ogaaday xaaladeeda, balse go'aanka lagu toosiyay lafhabarta uur-jiifka ayaa garaadkooda ka weyn".
" Waxaa la ii sheegay inay naafo tahay oo lafdhabarta ka qaloocan tahay, balse ma aysan ahayn, " ayay tiri Mrs Simpson.
Waxaa hooyadan loo ogolaaday in lagu qalo isbitaalka Jaamacada London bishii Disember, kaddib markii lagu sameeyay dhowr baaritaan oo uur-jiifka ah.
Qaliinka lagu sameeyay toddobaadkii 24-aad ee uur ku jirta ayaa waxaa qeyb ka ahaa furitaanka ilmagaleenka iyo in dhinac kale loo dhigo uur-jiifka si loo toosiyo qalooca, iyo sidoo kale dib u habeynta lafdhabarta.
" Waxaan kasoo baxay qaliinka hal saac waxaana isla habeenkii dareemayay dhaqdhaqaaqa ilmaha yar," ayay tiri Mrs Simpson.
Qalliin lagu sameeyey ilmo aan weli dhalan
Mrs Simpson ayaa la rumeysan yahay inay tahay bukaankii afaraad ee gudaha UK loogu sameeyo qaliinkan, iyada oo inta badan qaliinada noocaan ah lagu sameeyo dalka Belgium-ka iyo Mareykanka.
Laga bilaabo bisha April, qaliinkan ayaa laga heli doona isbitaalada qaran ee UK. Ku dhawaad 200 oo caruur ah ayaa ku dhasha UK sanad walba iyaga oo lafdhabartu ka qaloocan.
Dominic Thompson, oo ah dhaqtar neerfaha qaabilsan horseedna u ahaa dhaqaatiirti sameysay qaliinkan ayaa ku tilmaamay qaliinka ilmaha yar lagu sameeyay mid "aan la rumeysan karin".
Sikasataba ha ahaatee, Mrs Simpson ayaa ku boorisay waalidiinta dhigeeda ah inay ka fakaraan qaliin lagu sameeyo caruurta" waxkasta oo suuragal ahna ay ku dhaqaaqaan".
Image caption Mrs Simpson ayaa ah bukaankii afaraad ee gudaha UK loogu sameeyo qaliinkan
" Waxkasta ayaa dhici kara oo waa qaliin culus, waana go'aanka ugu culus oo aad qaadaneyso noloshaada," ayay intaasi kusii dartay.
Qalooca lafdhabarta iyo qaliinka lagu toosiyo
Qalooca lafdhabarta ayaa ka dhigan 'lafdhabarta oo kala baxda, waxayna dhacdaa markii lafta hoose iyo hilbaha kore aysan u korin si isku mid ah xiliga uurka yacni ( ka hor toddobaadka lixaad ee uurku jirta)
Waxaa xaaladan la kulma ku dhawaad afar caruur ah 10,000 oo haween xaamilka ah.
Bulsho deegaankooda laga mamnuucay in ay ilmo ku dhalaan
Ma laga yaabaa in buuggaan uu xal u bidhaamiyo waalidiinta qurba joogta?
Lama garanayo waxa sababa xaaladan, balse waxaa hooyooyinka lagu dhiirigaliyaa inay qaataan dawooyin kaalmaati ah xiliga hore ee uurka si ay hoos ugu dhacdo halista kororka qalooca lafdhabarta.
Caruurta ku dhalata xaalada lafdhabarta oo kala baxsan ayaa noqdo kuwa naafo ah, waxayna ka cawdaan xanuuno qeybta hoose ah sida caloosha iyo kaadi heysta taasi oo sidoo kale saameyn karta kobaca maskxadooda.
Waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 80% hooyooyinka lagu sheego in uur ku jirtooda lafdhabartu qaloocan tahay ay doortaan in ilmaha laga soo rido, inkasta oo xaaladaha uur ku jirto ay kala liidato.